बेफुर्सदिलो पनि के भन्नु र ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
बेफुर्सदिलो पनि के भन्नु र ?
प्रकाशित मिति : २०७६, ३ पुष बिहीबार १२:१९
जति सोच्यो, त्यति कहाली लाग्छ;
हाम्रा आमाबुबा अब औसत १५-२० वर्ष बाँच्नुहुन्छ । त्यो पनि नियमितजस्तै बनिसकेको कुनै दुर्घटना या असाध्य रोगव्याधि नलागे ।
हामी प्रवासमा छौं, प्रायः दुई वर्षमा एकपल्ट घर जान्छौं । सबै समय घरमैं बित्दैन । साथीभाइ, इष्टमित्र, रामरमाइलो, कार्यक्रम र घुमफिरको लामो लिस्ट हुन्छ घर जाँदा । आमाबुबासँग बिताउने भनेको औसतमा तीन दिन हुँदो रहेछ ।
बीस वर्षमा दशपल्ट घर पुग्यौं र तीन-तीन दिन बितायौं भने पनि जम्मा तीस दिन हुने रहेछ । यो जीवनमा, यो चोलामा, यो पालिमा आफ्ना जन्मदाता आमाबुबासँग बिताउनका लागि जम्मा एक महिना रहेछ हामीसँग ! त्यो पनि हामी सबै रोगव्याध नलागी बाँचिरहे । हरेक वर्ष नेपाल गए पनि दुई महिना न भयो ! यसो सोच्नुस् त, यो जिन्दगीमा आमाबुबासँग बिताउने समय कति थोरै रहेछ ! जसले सिङ्गो जिन्दगी हाम्रो खुशीका निम्ति बितायो, उसलाई दिनका निम्ति हामीसँग यो जुनीमा जम्मा एक महिना बाँकी ? एउटा साथी एक हप्ता भेटिएन भने कस्तो नमज्जा लाग्छ र फोन गरेर भन्छौं, ‘कति ठूलो भएको यार ! भेटघाट पनि हुन्न त !’ आमाबुबाका आँखा भने कुनै गुनासोबिनै बाटाभरि तेर्सिइरहन्छन् ! बर्सौँसम्म ! हामीलाई लाग्छ, फोन गरेकै छौं, औषधिउपचारका लागि पैसा पठाएकै छौं, सधैँभरि टाँसिएर बस्न त को सक्छ र ? तर आफ्ना सन्तान र साथीभाइसँग हामी आफै भने नटाँसिई बस्न सक्दैनौं ।
बेफुर्सदिलो पनि के भन्नु र ? मोदीदेखि इमरान खानसम्मलाई बधाई दिन भ्याएकै छौं । मन परेको दल या संस्थाको कार्यक्रम विश्वको जुन कुनामा भए पनि टाढ़ा हुँदैन । हरेक दिनजसो जन्मदिनका शुभकामना पनि लेखेकै छौं । नेतादेखि अभिनेतासम्मलाई शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न पनि भ्याएकै छौं । तर कहिलेकाहीँ आमाबुबालाई फोन गर्दा एकहप्ता बितिसकेको हुँदो रहेछ र त्यो हप्ता अस्पताल पुगेर पनि घर फर्किसकेको हुनुहुँदो रहेछ !
उमेर ढल्किँदै जाँदा सांसारिक विषय र रमझममा मन लाग्न कम हुँदो रहेछ । तपाईं या मैले वर्षको एकपल्ट लगिदिने एकजोर कपड़ा या जुत्तामा जति खुशी हिजो लुकेको हुन्थ्यो, आज या भोलि त्यो क्रमशः घट्दै जान्छ । घुम्ने रहर पनि मर्दै जाँदो रहेछ । मिठा खानेकुरा र चकलेट त पठाउँला तर उमेर र स्वास्थ्यसँगै त्यसको स्वाद बिलाउने रहेछ । स्मृति पनि कम हुँदै जाँदा उहाँहरूको बोली र व्यवहार पनि हामीलाई अनौठो लाग्न सक्छ !
जति सोच्छु मन एकतमासले गह्रुँगो हुन्छ । हामी उमेरको त्यस्तो चरणमा आइपुगेका छौं, एकाबिहानै या नसोचेको समयमा नेपालबाट फोन आयो भने पनि मन शङ्काले जिरिङ्ङ हुन्छ ! कुनै खुशीको खबर होला भनेर सोच्दैनौं । प्रायः हुँदैन पनि । खुशी र सपना जति त सात समुद्रपारि हामीले चोरेर ल्याएका छौं, उताबाट के खबर आओस् र ?
कहिलेकाहीँ लाग्छ, म माफीको लायक पनि छैन !
युरोपको पर्वत विस्फोट हुँदा झलमलाएको रात्रि आकाश(फोटोफिचर)
एट्ना पर्वतमा फेरि विस्फोट भएको छ र ज्वालामुखीले त्यहाँको आकाश झल्झलाकार पार्दैछ ।
खास समस्या ओलीमात्रै हुन्, अरू त गफ हुन् !
नारायण गाउँले । संसदमा बहुमत प्राप्त नेकपा भन्ने दल छ । म नभए